Ogaden News Agency (ONA) – Jilaa Magac Ku Lahaa Itoobiya oo Maraykanka Magangalyo Waydiistay.
Jilaa Itoobiyaan ah ayaa sheegay inuu waydiisanayo magangalyo siyaasadeed dalka Maraykanka, sababtana wuxuu ku sheegay tacaddiyada ay gaystaan ciidammada Woyaanaha.
Znah-Bzu Tsegaye, oo jilay filimaan Itoobiya caan ka ah ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada. Qowmiyadaha Amxaarada iyo Oromada oo ah dadka ugu badan Itoobiya, ayaa samaynayay mudaaharaadyo looga soo horjeedo dowladda bilooyinkii lasoo dhaafay. Dad badan ayaa dhintay.
Mr Znah- Bzu, ayaa ah qofkii ugu dambeeyay ee caan ah oo u dhashay Itoobiya oo magangalyo waydiista Maraykanka. Waqtigii ciyaaraha Rio Olympics, orodyahan reer Oromo ah ayaa go’aan ku gaadhay inuusan ku noqon waddanka, kadib markii uu sameeyay astaan muujinaysa inuu ka soo horjeedo dowladda.
Dhinaca kale waxaa sii kordhaya kacdoonada iyo dagaalada kajira wadanka Itoobiya waana sababta keentay in saxaafada cunaha loo qabto si ayna caalamku u ogaanin waxa kajira gudaha wadanka. Dadka kacdoonka wada ayaa iyagu jecel in ay saxaafada warka u gudbiyaan waxayna warbaahintu heshaa war uu siiyay goob jooge Doonaya in la ogaado waxa wadanka kajira.
Khal khalka siyaasadeed ee Itoobiya kajira ayaa keenay in ay siyaasiyiin, suxufiyiin iyo duuliyeyaal badan magan galiyo waydiistaan dowladaha shisheeye. Dhinaca kale xubnaha wadanka dibada uga baxsanaya ayaa shaaca kaqaadaya dhibaatooyinka ay xukuumada wayaanuhu ku hayso shacabka kuhoos nool.
Sikastaba ha ahaatee xukuumada wayaanaha ayaa hada si quman cagta usaartay wadadii burburka mar haday dadkii magaca lahaa dibadaha iska dhiibayaan.